Xisbiga 2-aad ee ugu wayn Sweden oo wada qorshe lagu mamnuucayo Xijaabka… | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Xisbiga 2-aad ee ugu wayn Sweden oo wada qorshe lagu mamnuucayo Xijaabka…
Xisbiga 2-aad ee ugu wayn Sweden oo wada qorshe lagu mamnuucayo Xijaabka…
(Stockholm) 25 Agoosto 2019 – Wargeeyska Dagens Nyheter ayaa maqaal ku sheegay inuu hoggaanka xisbiga Moderaterna (Golaha Sare ee Xisbigu) doonayo in baaris lagu sameeyo mamnuucidda xijaabka ee dugsiyada hoose/dhexe.
”Waxaa jira asbaabo wanaagsan ee iskuulka looga mamnuuci karo xijaabka oo si isku mid ah loola dhaqmi karo wiilasha iyo gabdhaha,” sida uu sheegay Gunnar Strömmer, xoghayaha xisbiga Moderaterna.
Su’aasha la xiriirta mamnuucidda xijaabka ayuu ku kala qeeybsan yahay hoggaanka xisbiga Moderaterna, iyadoona qaarkood ey mooshinno u direen shirwaynaha xisbig, halka qaarka kalena ey ka soo horjeedaan.
”Diyaar uma nihin inaannu iminka niraahno haa ama maya,” sida uu wargeeyska Dagens Nyheter u sheegay Gunnar Strömmer, hase yeeshee albaabka u furay baaritaan arrinkaa lagu sameeyo.
Iminka waa mid u taala golaha dhexe ee xisbigu inuu go’aan ka qaato arrinkaa illaa iyo inta ka harsan bisha oktoobar, inta ka horreeysa kulan weeynaha xisbiga.
Previous articleQofku marka uu XIL qabto muxuu u soo XUMAADAA?!! (Akhri geeddi-socodkan)
Next articleKHAJIL CUDUR U QARSO: Dhibaato; haweenka Soomaaliyeed ee Sweden oo XISHOOD dartii u qarsada cudur HALIS ah!!